Muqdisho oo saakay aanu ganacsi ka jirin | KEYDMEDIA ONLINE
Muqdisho oo saakay aanu ganacsi ka jirin
Muqdisho (Keydmedia) Waxaa saakay gabi ahaanba hakad ku jira howlihii dhaq dhaqaaqa ganacsi ee suuqa ugu weyn Soomaaiya ee Bakaaraha, waxaana arintani sabab u ah dagaalada ka soconaya iminka Magaalada Muqdisho.
Waxaa lagu arkayaa gudaha xaafadaha dad badan oo u shaqa tagi jiray suuqa bakaaraha oo iminka iyagoo fara laalaada dhex taagan xaafadaha Magaalada isla markaana aan wax howl ah faraha ku heyn.
" Waxaa cunta iga sugaya 7 caruur ah oo agooma ah, misna aabahood uu ku dhintay dagaalada ka socda Magaalada Muqdisho, waxaan ka dalbanayaa kooxaha dagaalamaya in ay u turaan shacabka" sidaa waxaa tiri hooyo Xaliimo Jaamac oo ka mid ah hooyooyinka Soomaaliyeed ee ka xoogsada Magaalada Muqdisho gaar ahaan suuqa Bakaaraha.
Gudaha Suuqa Bakaaraha ayaa laga dareemayaa cidla aad u badan iyadoona irdaha ay u laaban yihiin goobaha ganacsi ee ku yaala suuqaasi, waxaana arintani ay saameyn balaaran ku yeelan doontaa nolasha qoysaska danta yar ee Soomaaliyeed.
kooxaha ku dagaalama Magaalada Muqdisho magaca ay doonaanba ha sheegtaan ayaan u muuqan kuwa haba yaraatee aan u diir naxeyn shacabka Soomaaliyeed ee danyarta ah.